Xukuumada Oo Shirkadaha Shidaalka Ku Wargelisay Inaan Meel Lagu Shubo Loo Haynin Shidaalkooda – somalilandtoday.com
Xukuumada Oo Shirkadaha Shidaalka Ku Wargelisay Inaan Meel Lagu Shubo Loo Haynin Shidaalkooda
(SLT-Hargeysa)-Xukuumadda Somaliland ayaa shirkadaha shidaalka dalka keena ku wargelisay inaan bishan Septermber inta ka hadhay iyo bisha Oktoobar meel loo haynin shidaal ay dalka keenaan, gaar ahaan baatroolka.
Warqad qoraal ah oo uu maareeyaha kaydka shidaalka Berbera Xasan Axmed u gudbiyay toddobaadkii hore shirkadaha shidaalka keena dalka oo uu ogaysiin siiyay Madaxweyne Biixi, wasiirka ganacsiga iyo badhasaabka gobalka Saaxil, oo aan saxaafadda loogu tallo gelin balse uu Geeska Afrika helay, ayaa waxa kale oo ay xukuumadu sheegtay inay dalka keeni doonto naafato. Warqada ayaa u qornayd sidan “Mudanayal, waxaanu idinla socodsiinaynaa in baatroolka yaala uu dalka wadi karo muddo dhan laba bilood. Waxa iyana aad ogtihiin inay dawladu keenayso baatrool bisha Oktoobar. Si aanu haddaba u dhicin khasaare shirkadaha kaga yimaada dhammreyjka waxaan idinku wargelinayaa in aanaan meel u ahayn baatrool bishan inta ka hadhay iyo bisha oktoobr gudaheeda midna. Wixii intaas ka dib banaanaada waa laysla socodsiinayaa laakiin fadlan arrintan ha dhayalsanina maadaama ay taay go’aan dawladeed oo aan aad ugu adkaysanayno.
Xagga naafatada waxa aan wada ognahay in aa la keeni karayn naaftu sulferteedu ka badanthay 500 ppm, sidii marar hore af iyo qoraalba aan iskugu sheegnay.
Waxa kale oo aan idinla socodsiinaa in ay dhici karto in dawlada qudheedu ay naftada keento sida ay ugu talo jirto in baatroolkaba ay u keento.
Waxa la qorshaynayaa shidaal transit ah oo haamaha naaftada qaarkood loo isticmaalo.
Maadaama haddaba isbedel ku iman kro dadkii wax soo dejin jiray iyo awoodii kaydka haamah awaxaan idinka digaynaa aydaan gelin khasaare dhamaresjka ah ama khasaare ka yimaada markabka oo la celiyaba.
Qofkii daynaynaya inuu naafto keeno waxa lagu adkaynayaa inuu noo sheego xaddiga naaftada ah ee uu damacsanyahay in uu keeno ka dib waxa aan u sheegaynaa wakhti cadadkaas meel loo heli karo. Sida loogu soo kala horeeyo dalabka ayay maraakiibtu u kala horayn doonaan. Macno ma samaynayso in uu qof yidhaahdo, “Markab aya aii soo socda oo toban maalmood ka dib ii imanaya.”
Intaan makabka la soo rarin waa in laga heshiiyaa wakhtiga meel loo heli karo.”